FITSARAM-BAHOAKA : Mpanafika roa maty nofirafirain’ny mpanara-dia tamin’ny antsy
Dahalo roa lahy no matin’ny fitsaram-bahoaka avy eo notapahina ny ratsan-tananan’izy ireo dia noentin’ny fokonolona tao amin’ny biraon’ny ben’ny tanàna. 9 novembre 2017
Mpividy voka-bary nitondra omby sarety no notafihan’ny dahalo roa lahy tamin’ny alatsinainy maraina teo tokony ho tamin’ny 6 ora.
Tamin’ny lalana avy tany Marovoay hihazo an’Amboanio handeha hangala vary ireto farany no nosakanan’ny lehilahy roa nirongo sabatra sy zava-maranitra maromaro. Nambanan’ireo olon-dratsy tamin’ny antsy ilay lehilahy nitondra kalesa ary tsy nahahetsika intsony fa nijanona, nidina avokoa ny olona teo ambony sarety.
Noentin’izy roa lahy nandositra avy hatrany ny omby. Nampandre ny mponina avy hatrany ireo tompon’omby voatafika ary dia niroso tamin’ny fanarahan-dia. Voalaza fa teo Ambavarano Ambatomena dia saron’ny fokonolona nanara-dia izy roa lahy, ka avy hatrany dia niharan’ny hatezeram-bahoaka. Maty teo no ho eo ireto farany satria voafirafira antsy ary notapatapahina ireo rantsan-tanana tsirairay. Nandriaka ny ra teo an-toerana ohatra ny namono omby ny namonoan’ny fokonolona azy roa lahy ireo, araka ny fampitam-baovao azo.
Taorian’izany dia noentin’ireo fokonolona naseho ny ben’ny tanàna ao amin’ny Kaominina Bemanonga ireo ratsan-tanana roapolo. Omaly maraina dia mbola tsy nisy sahy naka ireo faty fa mbola tazan’ny mponina eo Ambavarano Ambatomena izay toerana namonoan’ny vahoaka azy ireo.
Manjaka ary dia tena mahazo vahana hatrany ny fanafihan-dahalo sy fanakanan-dalana any amin’ny Distrikan’i Morondava ankehitriny.